चोलेन्द्रको पहिलो एक्सनमा दीपकराज जोशी ,के छ एक्सनमा ? – www.agnijwala.com
चोलेन्द्रको पहिलो एक्सनमा दीपकराज जोशी ,के छ एक्सनमा ?
न्यायालयभित्र बिचौलीयाको अन्तय गर्ने कसम खाएर संसदीय सुनुवाई समितिबाट अनुमोदन भएका चोलेन्द्र शमसेर जबराले प्रधानन्यायाधीशमा पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएका छन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उनलाई सपथ गराएकी हुन् । मंगलबार संसदीय सुनवाई समितिले उनलाई महाअभियोगको त्रास देखाउँदै प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो । राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवासमा आज सपथ लिएका छन् । सपथ ग्रहणमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सभामुख कृष्णबहादुर महरा लगायत सहभागी थिए ।
सपथग्रहण भन्दा पहिले नै जवराले सर्वाेच्च अदालतभित्र एक्सन लिएका छन् । आफ्नो सपथ ग्रहण कार्यक्रममा संसदीय सुनुवाई समितिबाट अयोग्य घोषणा गरिएका न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई सपथ ग्रहणमा सहभागि गराएनन् । जोशीलाई सपथ ग्रहणमा सहभागि नगराउने आफैले निर्देशन दिएका थिए ।
जोशीलाई इजलास नतोक्ने गरी नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीशले कदम चालेका छन् । उनलाई आफ्नो स्वागतमा पनि सहभागी नगराउन रजिष्टारलाई मौखिक आदेश दिएका छन् । संसदीय सुनुवाईबाट अस्वीकार गरिएका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश जवरा पनि पेशी नतोक्ने भएका छन् ।